Rugby – «Gold Top 20»: resin’ny JSTA tany aminy ny Boeny | NewsMada
Rugby – «Gold Top 20»: resin’ny JSTA tany aminy ny Boeny
Nitohy ny faran’ny herinandro lasa teo, ny andro fahatelo fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja rugby “Gold Top 20”. Anisan’ny fihaonana iray nanamarika izany, ny fifandonan’ny JSTA Ambondrona, tamin’ny ekipan’i Boeny. Lalao notanterahina ny asabotsy lasa teo, tany Mahajanga.
Resin’Ambondrona, tamin’ny isa mazava, 41 no ho 13 tao amin’ny kianja filalaovany tao Mazava huile, ry zareo Boeny. Nitovy ny tanjaka, teo amin’ny mpilalao roa tonta, saingy nanatombo teo amin’ny teknika sy ny taktika, ny JSTA Ambondrona. Lesoka ho an’ny ekipan’i Boeny, ny tsy fahampian-dalao nefa manana ny fahaiza-manao ireo mpilalaony.
Tetsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka indray, nitranga ny tsy nampoizina satria lavon’ny FBM, tamin’ny isa 21 no ho 19 ny STM. Tetsy an-kilany, tamin’ny isa tery, 18 no ho 17 nanilihan’ny USA Ankadifotsy ny XV Fa ary lavon’ny TFA, tamin’ny isa, 27 no ho 22 ny SCB Besarety. VTMA indray, nanilika ny ASA, tami’ny isa, 13 no ho 10 ary nomontsanin’ny Cosfa, 42 no ho 10 ny FTA Andavamamba.